Ukunakekela ikati lengane | Amakati kaNoti
Ukunakekela ikati lengane
Njengalapho sizalwa, sibuthakathaka futhi sibuthakathaka, lapho amakati mancane, nawo abuthakathaka kakhulu, ngakho-ke adinga ukunakekelwa okudingekayo, ukuze sikwazi ukuqhubeka nokuthuthuka kahle. Amakati ezinjana adinga ukuthi sinikele isikhathi esiningi kuwo futhi kufanele futhi sibe nokubekezela okukhulu ukuze sikwazi ukuqala ukuwafundisa futhi sibafundise imithetho ethile eyisisekelo ukuze ukuhlala ndawonye kufaneleke.
Ngokufanayo, kubaluleke kakhulu ukuthi sifunde ukumboza i- izidingo eziyisisekelo njengokudla, ukuhlanza, inhlanzeko, nokuhlangana nabantu, kungaba nathi bantu, noma nezinye izilwane, ngale ndlela uzozwa ukuthi siyamthanda nokuthi siyamkhathalela. Kungenxa yalesi sizathu, ukuthi namuhla, sikulethela izici ezithile ezibalulekile okufanele sizicabangele lapho sinakekela ikati lembudlwana.
Okokuqala, kubalulekile ukuthi sibheke ukuthi sizoyithathaphi, okungukuthi, sizolala kubhasikidi wayo engxenyeni yendlu. Khumbula ukuthi indawo oyikhethayo kufanele ibe yindawo evaliwe, lapho okusalungiswa kungangeni khona, ngenkathi ubhasikidi owusebenzisayo, kufanele ube nezingubo ezikhiqiza ukushisa futhi zikwenze uzizwe ushisa. Uma kunesidingo, ngincoma ukuthi usebenzise ifayela le- isikhwama samanzi ashisayo ukuqinisekisa ukushisa okufanele ebusuku.
Kubalulekile futhi ukuthi, kusukela ufika ekhaya nje, sizame ukumenza azizwe ethandwa, simthambise kahle ukuze baqale ukubona ukuthintana nesikhumba sethu, futhi kancane kancane bakujwayele njengoba izindlela zokuxhumana nabantuNgale ndlela, kancane kancane bazozethemba ngokwengeziwe futhi ngeke babe nezinkinga zokuxhumana nabantu ngokuzayo.
Enye yezinto okufanele sisize yethu amakati we-puppy noma izinsana kakhuluKuwukuzikhulula, ngoba uma bebancane kakhulu bangaba nezinkinga zokuzikhulula, ngakho-ke ngincoma ukuthi uthathe ibhola likakotini eliswakeme ngamanzi afudumele bese uhlikihla indunu kancane. Khumbula ukuthi imvamisa ngumama ofundisa ukwenza le nqubo, kepha uma kwenzeka ukuthi intshontsho onalo lihlukaniswe lisencane kakhulu kunina, kuzofanela uzisize wena.
Indlela ephelele ye-athikili: Amakati kaNoti » Amakati » Curiosities » Ukunakekela ikati lengane
Uyini Umsila weStallion?
Izici zekati leBombay